Ihe kacha mma nke BIM Summit 2019 - Geofumadas
Geofumadas esonyere n'otu n'ime ihe omume mba kachasị mkpa metụtara BIM (Ozi Ụlọ Nzukọ Maka Ụlọ Nche), ọ bụ nzukọ European BIM Summit 2019, nke a na-enwe na AXA Auditori na obodo Barcelona-Spain. Ihe omuma a bu n'ihu Ahụmahụ BIM, ebe ị nwere ike ịchọta ihe ga-abịa maka ụbọchị ndị na-esonụ.
Ụbọchị mbụ na Ahụmahụ BIM, a na-ekewapụta ọrụ ndị a n'isiokwu atọ ka ndị bịara ya wee lekwasị anya dị ka ihe gbasara ha, nke mbụ n'ime ha Mee na BIM, nke abụọ Softwares na uru BIM, na nke atọ a kpọrọ aha BIM na nnukwu ihe m. Ụlọ ọrụ Roca ahụ sitere n'aka onye nnọchiteanya ya bụ Ignasi Pérez, bụ onye kọwapụtara mkpa BIM maka ihe owuwu, na-egosikwa ihe dị ka Data Ihe ọgụgụ isi maka Ụlọ: DIN2BIM site na PINEARQ, o Nchịkwa nke ihe owuwu ihe owuwu site na TeamSystems Open BIM.
N'oge ihe omume ahụ, anyị nwere ohere izute ọtụtụ ndị nnọchianya nke ụlọ ọrụ ndị isi na BIM ụwa, nke anyị kwuru na BASF, bụ nke gosipụtara Mmezi Nrụpụta Ụlọ Ọrụ, sọftụwia na-enye ohere iji mee ka ngwa ngwa maka ngwaahịa na ihe BIM dị ngwa. BASF, gosipụtara ndị bịara ya ka sọftụwia ya si arụ ọrụ na ezigbo ikpe, site na teknụzụ eziokwu emebere emezi.
Ihe e kwuru n'elu, na-egosi nbịbịa nke ọrụ ahụ na otú e si achịkwa ụdị BIM na oge ya na ngwọta nke ngwanrọ ya, na-enwe ike iji anya nke uche ya hụ ya; nke a bụ ihe dị mma nke BASF nyere, nke nyekwara ndị na-ege ntị a kaadiboodu iji bie ahụmahụ zuru ezu.
"Maka otu oru ngo, ọ na-enye ndụmọdụ nke ngwaahịa ndị dị mkpa ma na-enye gị ohere ibudata ozi niile nke ngwaahịa ndị ahụ, gụnyere ihe BIM na-akpaghị aka n'enweghị ịga site na ọbá akwụkwọ ma jiri nzacha". Albert Berenguel - European Marketing Manager nke BASF ewu Chemicals Spain
Ọzọkwa, ọ mara otu Visual Technology ụlọ nyocha ụlọ ọrụ bu n'obi kee ngwọta maka ndị nile so na yinye ewu, dị ka ụzọ BIM ụdị oghere-iko virtual / kwadokwara ọkpụkpọ òkù eziokwu ma ọ bụ mobile ngwaọrụ dị ka a cellular ma ọ bụ mbadamba , na nzube nke ijikwa BIM na saịtị na-arụ ọrụ. Ha na-enye ọtụtụ nke ọrụ gụnyere: mwekota BIM ka mebere eziokwu na kwadokwara ọkpụkpọ òkù eziokwu, multi-VR BIM ụdị ma ọ bụ video 360º / 3D-360º foto.
Visual Techology na-enye ngwa na-arụ ọrụ na mkpanaka ma ọ bụ mbadamba na ihe anyị na-eme bụ itinye igbe nnọkọ na ihe nlereanya ahụ, anyị na-etinye akara akara ozugbo na anyị na-ebupụ igbe nnọkọ ahụ, ọ bụghị ụdị niile, naanị ihe anyị chọrọ, na ekwentị mkpanaaka, nke tinyegoro teknụzụ na mbụ ma ọ bụrụ na ọ bụ Apple ARKit ma ọ bụ gam akporo ARCore, ọ ga-ekwe omume gbanwee ọnụ ọgụgụ nke ihe nlereanya ahụ, jụọ ụdị ihe ma ọ bụ mmewere nke nwere ụdị ahụ, ọdịdị, mechaa ma mepụta njikọta. Iván Gomez - Nyocha Teknụzụ Anya
Mgbe ahụ nọgide agaa leta n'ihu nke onye ọ bụla n'ime ndị ọkà okwu, anyị na-ahụ nnọchiteanya nke Lumion Sanchiz Alba, onye kọwara otú ndị ọhụrụ version Lumion 9, a na ngwá ọrụ na-arụ ọrụ - onye nwere ike ịsị, karịa bara uru n'ihi na ndị na-mkpa na-eji oge emebe ewu ná nsụgharị usoro. Nke a software na-enye ohere ibubata nke CAD / BIM na ụdị na-aza ha ihe n'ụzọ dị mfe.
"Lumion 9 akwado BIM software na ụkpụrụ ụlọ imewe ka. Sketchup, enyí ọhịa, Graphisoft ArchiCAD, Autodesk 3DS Max, Allplan, Revit, Vectorworks na AutoCAD" Alba Sanchiz -LUMION
GRAPHISOFT nnọchiteanya gosiri ndị ọhụrụ version of ArchiCAD 22, otu n'ime ndị ọsụ ụzọ na ụwa BIM software - data management na nchikota nke projects- n'aka kpughere ya ọhụrụ ikpo okwu maka ọzụzụ.
"Nkụzi ọzụzụ na-adabere na usoro ntinye aha, ihe ọhụrụ, maka ụmụ akwụkwọ na ndị ọkachamara. Ị gaghị akwụ ụgwọ maka otu nkwekọrịta, ma na ndenye aha ị nwere ike ịnweta ọmụmụ na ọkwa niile dị na ya. , dabere na njirimara onye ọrụ ahụ, niile bara uru ma kwadoro ya na GRAPHISOFT ". GRAPHISOFT-ARCHICAD
I nwere ike ileghara anya ndị nnọchiteanya nke 5 Nordic mba, Denmark, Sweden, Finland, Iceland na Sweden a mbipụta pụrụ iche nke BIM 5ta Summit- ọ bụla na onye ọ bụla nke ya n'ihu lekwasịrị anya -Guests-apụta na e ka Ụzọ dị ogologo iji gaa na isiokwu BIM.
N'etiti exponents, Gudni Gudnasson, onye na-ekwu banyere ihe ịma aka n'ihu site na mmejuputa azum BIM nwekwara Jan Karlshoj kọwaa mmetụta nke ọha chọrọ maka openBIM na Denmark, n'ikpeazụ pụta ìhè Anna Riitta Kallinen gosiri bụ RASTI ngo ka a atụmatụ na ụzọ maka Standardization of ọmụma management na wuru gburugburu ebe obibi.
Anyị na-anọgide na njem nke n'ihu, na ngosi site nnọchiteanya nke Bentley Systems Anna assama, onye were ihe mgbu aka ịghọta mkpa nke nkà na ụzụ innovations, mmekọrịta ha na gburugburu ebe obibi, na dị ka Bentley agbanweela horizons site na nke a ihe omuma nke ichota gburugburu ebe obibi na ndu ndu.
"Synchro, ọ bụghị nanị simulation 4D na oge, bụ ikpo okwu maka njikwa ịchịkwa" - Ana Assama - Bentley Systems
Mgbe ahụ assama kọwara, gịnị bụ ngwá ọrụ Bentley awade, malite na nke odide data na a ígwé ojii-ígwé ojii ọrụ analysis ike na - Power bi-, na-eme atụmatụ - SYNCHRO PRO-, akara na usability -SYNCRO XR- ewere niile a feedaback, mezue otú a na-eke usoro.
"Synchro bụ ihe ọ bụla ma a haziri usoro ihe omume na Synchro nwere ike na-eme atụmatụ na jikwaa ozi, naanị-ewere 3D data ụdị ọrụ, ie amalite ụbọchị na ọgwụgwụ, ha nwere ike na-eme atụmatụ dị ka ga-ẹkụre ọrụ na ụfọdụ Nchịkọta "Anna Assama - Bentley Systems
Nhazi ihe ntaneti nwere ike ibu uzo nke ihe ndi ozo, site na Synchro XR maka Hololens, ihe di oke mkpa dabere na ihe di iche, nke bu, ugbu a i nwere ike na-eburu n'uche na eziokwu nke gburugburu ebe obibi.
Otu ozi kachasị mkpa, nke ekwuru na BIM Summit 2019, bụ na, maka gọọmentị nke Catalonia, iji BIM ga-abụ iwu na ọrụ obodo niile na asọmpi iwu ụlọ; nke a ekwuputala site na Secretary General maka Territory na Nkwado nke Gọọmenti Catalonia - Ferrán Falcó. Ihe a ga-amalite site na June 11 nke afọ a, ma nwee ego karịrị nde euro 5,5. Okwesiri ighota na, otutu mpaghara nke Spain, ufodu iji BIM choro n’ime oru ndi mmadu
Na 5ta mbipụta BIM Summit, ị nwere ike họrọ nke bụ ihe kasị mma, nanị n'ihi na-enye a hụperetụ nke ihe niile na integrates a nnukwu netwọk nke nnukwu, ọkara ma ọ bụ obere ụlọ ọrụ, na-eme nnyocha, ọmụmụ ha, ụmụ akwụkwọ, ọ na-anọchi anya a nnukwu ụwa ohere, nke ọtụtụ ndị ọkachamara ga-achọ ka ha jikọọ.
Ọ na-egosipụta njirimara nke ndị na-egosipụta ya, iji gosipụta ọganihu ha ọ bụla na nkà na ụzụ, ma mee ka ndị ọbịa ghọta otú ha nwere ike isi gbanwee ụzọ anyị si egosipụta ụwa anyị dị ugbu a ma mepụta ọhụụ ọhụrụ ma ọ bụ ihe ngwa ngwa, nke ọma.
Anyị na-ekele ndị nile na-nyere nkọwa nke BIM, na okwu ha innovations, dị ka òtù nke simbim Solutions, BIM Academy, MUSAAT, ASSA ABLOY, ACCA, CALAF, ArchiCAD, Smart Building, Institute of Technology nke ewu Catalonia- IteC, ProdLib. Pinearq, TeamSystem Construction na Construsoft, nke ikpeazụ natara award maka iguzosi ike n'ihe BIM Summit a 2019.
Anyị na-atụ anya ihe omume na-esonụ metụtara isiokwu a, na-atụ anya gụnyere teknụzụ dịka GIS - Geographic information systems, dị mkpa iji chọpụta ihe dị iche iche gbasara mbara igwe, mmekọrịta ya na BIM na nkeji dum nke gụnyere ihe owuwu. Anyị na-aga n'ihu!
Previous Post«Previous Na-enyocha Nnyocha data data Google dị oke mkpa - Ihe ijuanya!
Next Post Anyị malitere Geo-Engineering - Magazin ahụNext »